चिनियाँ गतिविधि बढेकोमा प्रचण्ड चिन्तित्, भारतलाई साथमा लिनुपर्ने अडान ! « रिपोर्टर्स नेपाल
चिनियाँ गतिविधि बढेकोमा प्रचण्ड चिन्तित्, भारतलाई साथमा लिनुपर्ने अडान !
प्रकाशित मिति : 2019 September 28, 4:36 pm
काठमाडौं, ११ असोज । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ सक्रियता बढेको बेला अध्यक्ष दाहालले भारतलाई माईनस गरेर जान नहुने कुरा पार्टीका आफूनिकट नेताहरुलाई बताउन थालेका छन् ।
चिनियाँ विदशेमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै काठमाडौंमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको विचारधाराबारे बहस भएपछि नेपालमा राजनीतिक सरगमी ह्वात्तै बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त वर्तमान सरकार र नेकपा एकदलीय शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख हुन कोशिस गरिरहेको आरोप लगाएको छ । सि विचारधारा सापट लिनुपर्ने अवस्थामा नेकपा पुगेको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले पछिल्लो समय खरो टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
यी यावत विषयहरु सार्वजनिक रुपमै बहस र विवादको विषय भनेपछि नेपालस्थित् अमेरिकी राजदुत र चिनियाँ राजदुतले पनि राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् । काठमाडौंमा कुटनीतिक–सरगमी अस्वभाविक रुपमा तातेको छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।